कर्णालीमा चुरे : अवस्था र जोखिम - SatyaPatrika
सरकारले नयाँ बजेट बक्तब्य सार्वजनिक गरेसंगे चुरेको बारेमा जताततै बहसहरु भैरहेका छन् । खासगरी बजेट बक्तब्यको बँुदा नम्बर १९९ मा भएको व्यवस्थाले मानिसलाई झस्काएको छ । उक्त बुंदामा भएको पहाडबाट उत्खनन गरि गिट्टी बालुवा निकासी गर्न दिने भन्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आएमा चुरे विनास हुने भन्दै जताततै बहस चलिरहदा कर्णालीको चुरेकोबारेमा आवाजहरु सुनिएका छैनन् । के कर्णालीको चुरे सुरक्षित छ ? यस आलेखमा कर्णाली प्रदेशको चुरेको अवस्था र संकटको चर्चा गरिएको छ ।
महाभारत पर्वत श्रृंखलाको दक्षिणी सिमानादेखि तराइ मैदानको उत्तरी सिमाना विचको होंचो डाँडा र पर्वत श्रृंखला नै चुरे हो । यो क्षेत्र पाकिस्तानको इन्दुस नदीदेखि नेपाल हुदै भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको छ । समुन्द्री सतहको १२० मिटर देखि २००० मिटर सम्मको उचाइमा अवस्थित चुरेले नेपालको करिव १३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । तराइका २० र पहाडका १६ गरि ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरेलाइ हिमालय पर्वतीय क्षेत्रको सबै भन्दा कान्छो र कमजोर भू–धरातल मानिन्छ ।
बालुवा, गिर्खे चट्टान,कंकड माटो र पत्रे चट्टानबाट बनेको चुरे क्षेत्रसंगै दक्षिणमा नदीले बगाएर ल्याएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र कंकडले बनेको भावरको समथर भूभाग छ । नेपालको प्राकृतिक वन मध्ये २६ प्रतिशत वन चुरे क्षेत्रमै रहेको छ । चुरेमा ३ प्रतिशत कोण्ँधारी (सल्लो प्रजाति) , ८३ प्रतिशत साल तथा उष्ण प्रदेशीय वन र १४ प्रतिशत मिश्रित वनस्पतियुक्त वन पाइन्छ । चुरेमा १३ किसिमका पारिस्थितिकीय प्रणाली – छन् जहाँ १ हजार ५ सय ७० भन्दा बढी प्रजातिका फूल फुल्ने वनस्पति र अन्यत्र नपाइने वन्यजन्तु पाइन्छन् ।
चुरेलाई तराईको जीवन मानिन्छ । चुरे पहाडको (खोंचसहित) ८३.४७ प्रतिशत क्षेत्रफल वन, झाडी र घाँसे मैदानले ढाकेको छ भने १३.१६ प्रतिशत कृषि तथा बस्तीले र ३.३७ प्रतिशत नदी बगरले ढाकेको छ । त्यसरी नै भावरको ५८.४० प्रतिशत भूभाग कृषि तथा बस्तीले ३५.०९ प्रतिशत झाडी घाँसे मैदान, र ६.५१ प्रतिशत नदी बगरले ढाकेको छ । चुरे र भावर क्षेत्रले वर्षा र नदीको पानीलाई सोंसेर राख्दछ, जुन तराईको भूमिगत पानीको मुख्य श्रोत हो । चुरेको नदि प्रणालीमा १६४ वटा नदि छन् । चुरेमा रहेको वनजंगलले तराइमा सुन्दरता थप्ने काम मात्र गरिरहेको छैन, तराईलाई शितलता प्रदान गर्ने र स्थानीय बासिन्दाका वन पैदावार सम्बन्धि अवास्यकताहरु पुरा गर्ने काम समेत गरिरहेको छ । चुरेले माटो र पानी संरक्षण गरेर तराईको उर्वर भूमि जोगाउँदै खाद्यान्न उत्पादनमा योगदान दिईरहेको छ । चुरेसँग १ करोड ३३ लाख १८ हजार ५०७ जना नेपाली अर्थात् कूल जनसंख्याको ५०.२७ प्रतिशत जनसंख्याको जीवन गाँसिएको छ । नेपालका झन्डै १५ लाख परिवार प्रत्यक्ष रुपमा चुरे भावर क्षेत्रमै आश्रित रहेका छन् ।
सामान्य नेपालीले कर्णालीलाइ उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्र भएको प्रदेशको रुपमा चिन्छन् । कर्णाली प्रदेशमा चुरे पहाड छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहै छैन । त्यसैले चुरेको बहसमा कर्णालीको चर्चा छुटिरहेको हुन्छ । कर्णालीका दक्षिणी २ जिल्लाहरुमा बबई र भेरी नदीको छेउछाउ चुरे रहेको छ । सल्यान जिल्लामा ३२ हजार ६४९ हेक्टर भूभाग चुरे छ, जुन हालको कालिमाटी गाउँपालिकामा रहेको छ । कर्णालीको सबैभन्दा धेरै चुरे क्षेत्र सुर्खेत जिल्लामा रहेको छ । सुर्खेतको करीब ४६ प्रतिशत भूभाग अर्थात एक लाख १४ हजार ८७१ हेक्टर चुरेले ओगटेको छ । विस. २०६८ को जनगणना अनुसार सुर्खेतको चुरेमा २ लाख १९ हजार ४८९ जना र सल्यानको चुरेमा १३ हजार ४८९ जनाको बसोबास रहेको छ । बबई र भेरीको सेरोफेरोमा रहेको कर्णालीको चुरे यी नदीको प्रमूख जलाधार क्षेत्रहरु हुन् । प्रदेशको मुख्य उष्ण र उपोष्ण प्रदेशीय वन यहि क्षेत्रमा रहेको छ । पानीको प्रचुरता, घना जंगल जस्ता कारणले यो क्षेत्रले मुख्य जैविक करिडोरको काम गरिरहेको छ ।
वि.स. २०१० सालसम्म सुर्खेतको मैदानी भाग र दक्षिणी चुरेमा करिब ८०० परिवार मात्र रहेको तत्कालिन जनगणना प्रतिवेदनले देखाउछन । वि.स. २०२० सम्म सुर्खेत उपत्यका थारु र राजीहरुको बसोबास भएपनि त्यो भन्दा दक्षिणी चुरे बसोबास रहित थियो । सुर्खेत उपत्यकामा औलो उन्मुलन कार्यक्रम शुरु भएपछी पहाडबाट मानिसहरु सुर्खेतको मैदानी भूभागमा झरे भने थारुहरु क्रमश दक्षिण तर्फ धकेलिदै गए । पहाडबाट झरेका तर सुर्खेत उपत्यकामा बस्न नसकेकाहरू पनि भेरी नदि र उपत्यकाको मैदानी भागसंग जोडिएका चुरेमा बस्न थाले । २०३० को दशकमा नेपालगंजदेखि चुरे पहाड छिचल्दै सुर्खेतमा रत्न राजमार्ग पुगेपछि हालको भेरिगंगा नगरपालिका र उपत्यकाको दक्षिणमा चुरेमा वस्तीहरु बढ्दै गए । छिन्छु –जाजरकोट सडक निर्माण संगै पूर्वी चुरेमा पनि घना वस्तीहरु बन्दै गएका छन् ।
माओबादी द्वन्दको कारणले पनि सुर्खेतको चुरेमा बसाइसराई उच्च हुन् पुग्यो । वस्ती विकास हुदै जादा त्यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाको वनमा देखिदै गयो । सन् १९९५ मा सुर्खेतको चुरेको ९० हजार ४५५ हेक्टरमा वन रहेकोमा सन् २०१० मा आइपुग्दा ८७ हजार २३ हेक्टरमा खुम्चिएको थियो । यस अवधिमा सुर्खेतको चुरेको वन वार्षिक ०.२६ प्रतिशतका दरले विनास भएको देखिन्छ । सो अवधिमा सल्यानको चुरेको वन २९ हजार २२९ बाट २८ हजार ३०८ हेक्टरमा खुम्चिएको थियो । वन विभागको सन् २०१० को एक तथ्यांक अनुसार सल्यान र सुर्खेतको चुरेको क्रमश ५.९ प्रतिशत र १७.१ प्रतिशत भूभाग कृषिमा प्रयोग गारिएको थियो । तराईसंग सल्यानको सिधा सम्पर्क नरहेकै अवस्थामा दक्षिणी क्षेत्रमा बाके राष्ट्रिय निकुन्ज स्थापना भएकोले सल्यानको चुरे क्षेत्रमा मानिसहरुको धेरै आकर्षण नभएकोले त्यहाँ मानवीय चहलपहल अहिलेपनि कम नै छ । तर सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएको र कर्णालीकै द्वार भएकोले गर्दा चुरे र यसको छेउछाउमा वस्ती विकास हुने क्रम उच्च छ । यसले भविस्यमा सुर्खेतको चुरेमा गम्भीर समस्या देखिने प्रष्ट संकेतहरु मिलेका छन् ।
कर्णालीका चुरे हुदै दर्जनौ कच्ची सडकहरु निर्माण भैरहेका छन । यी सडकको कारण चुरे कमजोर भैरहेको छ र भूक्षय बढ्दो छ । यहाकै चुरेमा राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बनिरहेको छ । सुरुंग छेडिएपनि अरु संरचनाहरु तयार भएका छैनन् । भविस्यमा सिचाई र विद्युत उत्पादनका लागि चुरेमा अनेकौ भौतिक संरचनाहरु बनाउनुपर्नेछ, जसले चुरेमा नै क्षति पुग्नेछ । भेरी नदीको पानीलाई बबईमा झारेपछि भेरीमा पानी कम हुदा चुरे क्षेत्र अझ सुख्खा हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । तराइसंग जोडिएका चुरेमा जस्तो सुर्खेत र सल्यानका चुरे दोहनका जटिल समस्याहरु छैनन् तर यहाँ नदि दोहन उच्च भएको र नदीकै बहानामा चुरे खोस्रने प्रवृति रहेकोले चुरेमा अवैध उत्खनन भने चलिरहेकै छ । संघीय सरकारको बजेट बक्तब्य अनुसार सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाको सहारे र सल्यानको कपुरकोट गाउपालिकाको धनवांगबाट गिट्टी ढुंगा निकालेर भारत निकास गर्ने सरकारको योजना छ । महाभारत क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने भनिएपनि यसको प्रत्यक्ष असर छेउछाउको चुरेमै पर्नेछ ।
कर्णालीको मुटु सुर्खेत हो र सुर्खेतको जीवन चुरे हो । चुरे असुरक्षित भैरहे सुर्खेतको आर्थीक, सामाजिक र वातावरणिय अवस्था सुरक्षित रहन सक्दैन । राष्ट्रिय वहसमा कर्णालीको चुरेको कम चर्चा हुने गरेको भएपनि यहाको चुरे सुरक्षित रहेको भने छैन ।
कर्णालीको चुरेको सम्बेदनशिलतालाई बुझेर प्रदेश सरकारले दिर्घकालिन योजना बनाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म यसतर्फ उचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । चुरेलाई कसरि ब्यवस्थापन गर्ने, यहाँका वस्तीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने? चुरेबाट कसरि लाभ लिने भन्ने जस्ता कुराहरु प्रदेश योजनामा परेका छैनन् ।
ढिलै भएपनि भर्खर कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा चुरे तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका खोला र खहरेहरूमा वायोइन्जिनियरिङ प्रविधिद्वारा भू–संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै पानी संरक्षणको लागि मुहान, ताल तथा पोखरीको संरक्षण, जलाशययुक्त मनोरञ्जन स्थल निर्माण र भू–जलसञ्चय प्रणाली विकास गरिनेछ भन्ने कुरारु परेका छन् ।
चुरे क्षेत्रमा रहेका सबै पालिकाहरुले पनि मिलेर यस्ता कार्यक्रमहरु व्यवहारिक रुपमा संचालन गर्नुपर्छ । चुरेको वन जंगल र जैविक विविधतालाई संरक्षण गरि कपुरकोटेखि कर्णाली नदीसम्मको चुरे क्षेत्रलाई पर्यटकीय थलोको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । सुन्दर र हराभरा पहाड कर्णालीको पहिचान हो,पहिचाल जोगाउने कामको शुरुवात चुरे पहाडबाट शुरु गर्नुपर्छ ।
चुरे बाेर्ड वन विभाग